कुकुरले सुँघेरै पत्ता लगाउदै कोरोना संक्रमित, पुरा पढ्नुहोस् ! – hamrosandesh.com
कुकुरले सुँघेरै पत्ता लगाउदै कोरोना संक्रमित, पुरा पढ्नुहोस् !
एक अध्ययनले खास नश्लको एक कुकुरले सुँघेरै कोरोना संक्रमण भए–नभएको पत्ता लगाउन सक्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
ल्याब्रडोर जातको तालिमप्राप्त कुकुरले सुँघेरै कोरोना भए नभएको पत्ता लाग्ने दाबी गरिएको छ । जुन पिसिआर वा एन्टिजेनको माध्यमबाट गरिएको परीक्षणभन्दा प्रभावकारी पाइएको जनाइएको छ ।
संक्रमित व्यक्तिको काखी वा उसले लगाएको मोजाको पसिनाले थोरै कपास भिजाइन्छ । त्यसपछि त्यो कपास डल्लो पारेर कुकुरलाई सुँघाइन्छ । कोरोना लागेका व्यक्तिको जीउको विशेष गन्ध कुकुरले चाल पाउँछ । त्यही गन्ध पछ्याउँदै अरू संक्रमित पत्ता लगाउन सक्छ।
अमेरिकी पत्रिका ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’ मा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न देशको प्रारम्भिक अध्ययनबाट कुकुरले सुँघेर कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउने निष्कर्ष निस्किएको हो ।
कुकुरले सुँघेर परीक्षण गरिने विधिलाई प्रभावकारी मान्दै अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, चिली, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, थाइल्यान्ड लगायत थुप्रै देशमा कुकुरबाट कोरोना परीक्षण गराउन थालिएको छ ।
यसले सार्वजनिक यातायात, रंगशालालगायत बढी भीडभाड हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा कोरोना संक्रमित पहिचान गर्न सजिलो हुने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
थाइल्यान्डको बैंककस्थित छुलालोङकोर्न विश्वविद्यालयको भेटेरिनरी विभागले ६ वटा कुकुरबाट कोरोना परीक्षण गराएकोमा त्यसको नतिजा विमानस्थल तथा अन्य सार्वजनिक ठाउँमा गरिँदै आएको एन्टिजेन परीक्षणभन्दा राम्रो रहेको बताइएको छ ।